Manova Olona ny Baiboly | Herin’ny Tenin’Andriamanitra | JW.ORG
Izy Rehetra Manova Olona ny Baiboly Fitoriana Momba ny Baiboly Tanjona Amin’ny Fanompoana Fiatrehana Olana Tsy Fivadihana
Jereo amin’ny tantaram-piainan’ny olona ato hoe tena mihatsara be ny toetran’ny olona maro maneran-tany, noho ny Tenin’Andriamanitra.
Fiainana Misy Dikany
Juan Pablo Zermeño: Nataon’i Jehovah Mahafinaritra Be ny Fiainako
Raha nampalahelo be ny fiainantsika taloha, dia mety hisy vokany lalina sy haharitra amintsika izany. Na dia hoatr’izany aza ny fiainan’i Juan Pablo, dia lasa nisy dikany ny fiainany tatỳ aoriana. Lasa sambatra sy nilamin-tsaina koa izy.
Johny sy Gideon: Mpifahavalo Lasa Mpirahalahy
Zavatra fahita isan’andro ny fanavakavaham-bolon-koditra, any amin’ny faritra sasany. Nahavita nandresy an’izany anefa ny lehilahy roa atsy Afrika Atsimo.
Rahoviana no Hanjaka ny Fitiavana ary ho Resy ny Fankahalana?
Mety ho sarotra ny mandresy ny fankahalana. Jereo hoe inona no nanampy ny Jiosy iray sy ny Palestinianina iray hahavita an’izany.
Hitan’i Ernest Loedi ny valin’ny fanontaniany. Lasa be fanantenana izy, noho izany.
Mpampianatra i Doris Eldred. Ny mpianany indray anefa no nampianatra azy ka nanampy azy hahita ny valin’ny fanontaniana nanahiran-tsaina azy.
Nanontany tena i Yvonne Quarrie indray mandeha hoe: ‘Maninona aho no nisy?’ Nanova ny fiainany ny valin’​io fanontaniana io.
Nahavita Be Tamiko i Jehovah
Nisy nametaveta i Crystal tamin’ny mbola kely. Lasa nifandray tamin’i Jehovah izy ary lasa nahatsiaro ho sambatra, satria nianatra Baiboly.
Inona no nanampy an’i Israel Martínez tsy hieritreritra hoe tsy misy ilana azy mihitsy izy?
Lasa nifoka rongony sy nisotro toaka i Renée. Afaka tanteraka tamin’izany anefa izy tatỳ aoriana. Fa inona no nampiova azy?
Nijaly be i Julio Corio noho ny loza nanjo azy, ka lasa nieritreritra izy hoe tsy niraharaha azy Andriamanitra. Nanampy azy hiova hevitra anefa ny Eksodosy 3:7.
Nisy zavatra hitan’i Christof Bauer tao amin’ny Baiboly, ary nanova ny fiainany ilay izy. Inona izany?
Tiako Hanjaka ny Rariny
Te hiady tamin’ny tsy rariny i Rafika, ka niditra tamina fikambanana iray. Nianarany tao amin’ny Baiboly anefa tatỳ aoriana hoe ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no hahavita hanafoana ny tsy rariny sy ny korontana.
Nianatra Baiboly ny lehilahy mpitolona iray ka lasa nahafantatra hoe iza ihany no mahavita manova an’izao tontolo izao. Vakio ato ny tantarany.
Jereo hoe ahoana no nanampian’ny Baiboly an’i Cindy mba tsy hahery setra intsony.
Namolavola ny fiainan’ny tovolahy iray ny Kominisma sy ny fampianarana hoe tsy misy Andriamanitra. Nahoana anefa izy no lasa liana tamin’ny Baiboly?
Efa tsara asa ny olona iray nefa tsy sambatra. Ny iray kosa mpiloka be ary ny iray kivy tamin’ny fiainana. Tena sambatra anefa izy ireo izao. Inona no nataony?
Niova Zavatra Inoana
‘Be dia Be ny Fanontaniako Mbola Tsy Voavaly’
Pasitera i Mario taloha. Inona no naharesy lahatra azy hoe mampianatra ny marina momba ny Baiboly ny Vavolombelon’i Jehovah?
Namaly ny Fanontaniako Rehetra ny Baiboly
Tsy nino an’Andriamanitra intsony i Mayli Gündel rehefa maty ny dadany. Inona no nanampy azy hilamin-tsaina sy hino an’Andriamanitra indray?
Nampiasa Baiboly Foana ry Zareo!
Masera i Isolina Lamela ary avy eo lasa Kominista. Samy nandiso fanantenana azy anefa ireo. Nihaona tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah izy tatỳ aoriana, ary nampian’izy ireo hahafantatra ny antony ahavelomantsika.
Kivy Tamin’ny Fivavahana Aho
Mba te hahafantatra an’Andriamanitra i Tom, nefa nanjary diso fanantenana tamin’ny fivavahana. Lasa nanana fanantenana indray anefa izy rehefa nianatra Baiboly.
Nisy mpivavaka nafana fo nanontany hoe nahoana isika no maty ary inona no mitranga rehefa maty isika. Nahita valiny ihany izy, ary nanova ny fiainany izany.
Te ho lasa mompera i Roberto Pacheco, tamin’izy mbola kely. Inona no nahatonga azy hanova ny tanjony?
Te ho lasa misionera mormon i Luis Alifonso. Nahoana anefa izy no nanova ny tanjony sy ny fiainany rehefa nianatra Baiboly?
Zava-mahadomelina sy Toaka
Nisy nanontany i Michael Kuenzle tamin’izy niditra niasa hoe: “Andriamanitra ve no mahatonga ny fijaliana eto an-tany, araka ny hevitrao?” Niova be ny fiainany nanomboka teo.
Tena Nivarilavo Aho
Nifindra tany Etazonia i Solomone satria mba te ho sambatra. Lasa nidoroka zava-mahadomelina anefa izy tany, ary nigadra tamin’ny farany. Inona no nanampy azy hiova?
Tsisy Trano Nipetrahana Aho
Nahery setra be i Antonio taloha, mpidoroka zava-mahadomelina, ary mpiboboka toaka. Tsapany hoe tena tsisy dikany ny fiainany. Inona àry no nahatonga azy hiova?
Nanova tanteraka ny fiainan’i Joseph Ehrenbogen ny zavatra novakiny tao amin’ny Baiboly.
“Nieritreritra Be Aho hoe Ahoana no Hiafaran’ny Fiainako”
Ho hitanao ao fa nanampy lehilahy iray hanova ny fahazarany sy ny fomba fisainany ny toro lalan’ny Baiboly, ka afaka nampifaly an’Andriamanitra izy.
Mamo lava i Dmitry Korshunov. Nanomboka namaky Baiboly isan’andro anefa izy. Niova izy, ka lasa sambatra. Inona no nanampy azy?
Inona no toro lalan’ny Baiboly nanampy ny tovolahy iray tsy hifoka sigara sy rongony, ary tsy hisotro toaka be intsony?
Heloka Bevava sy Herisetra
Rehefa avy nafahana tany am-ponja i Artan, dia lasa fantany hoe marina ny zavatra lazain’ny Baiboly momba ny fitiavam-bola.
Inona no nanampy an’i Sébastien Kayira tsy hahery setra be sy tsy hampijaly vady intsony?
“Ny Nataoko Ihany no Saika Nahafaty Ahy!”
Inona no nampiova ny jiolahy iray tany Salvadaoro?
Nahery setra be i Sobantu taloha, nefa niova rehefa nahalala an’izay tena ampianarin’ny Baiboly. Miresaka amin’ny mpiara-monina aminy izy izao hoe mbola ho foana ny heloka bevava sy ny asan-jiolahy.
Niaiky ny lehilahy iray fa tena manova olona tokoa ny Baiboly. Jiolahim-boto mantsy izy taloha nefa niova. Lasa mifandray tsara amin’Andriamanitra izy izao.
Te hiala tamin’​ny toetra ratsiny ny tovolahy meksikanina iray mpiady an-dalambe. Nahoana?
Nanohina ny fon’i Alain Broggio ny 1 Jaona 1:9.
Nahery setra i Pawel Pyzara, nidoroka zava-mahadomelina, ary nitady asa be karama. Niova anefa izy rehefa avy niady tamin’ny lehilahy valo be izao.
Nahery setra be i Stephen McDowell. Tapa-kevitra ny hiova anefa izy rehefa nisy vonoan’olona saika nahavoaroiroy azy.
Lasa Fantatro hoe Mamela Heloka i Jehovah
Tsy azon’i Normand Pelletier ny ainy raha tsy manambaka olona izy. Nanohina ny fony anefa ny andinin-teny iray ao amin’ny Baiboly ka nilatsaka ny ranomasony.
Mpanao kung-fu nikoizana i Antoine Touma. Tena nanova ny fiainany anefa ny 1 Timoty 4:8.
Jiolahy nahery setra i Annunziato Lugarà taloha, fa niova rehefa nivory indray mandeha tany amin’ny Efitrano Fanjakana.
Fantaro hoe nahoana ny fianarana Baiboly no nampiova lehilahy iray nahery setra.
Fanatanjahan-tena, Hira, Fialam-boly
Mbola tanora i Stéphane dia efa nalaza sy nanankarena. Mbola nahatsapa ihany anefa izy hoe nisy banga ny fiainany. Tena sambatra kosa izy izao! Ahoana no nataony?
Nahoana ny lehilahy iray mpilalao tenisy matihanina no lasa mpampianatra Baiboly?
Nanontany ny namany i Erwin Lamsfus indray mandeha hoe: “Efa mba noeritreretin’ialahy ve hoe fa maninona àry isika no misy e?” Nanova ny fiainany ny valin’ilay fanontaniana.
Inona no nanampy ny lehilahy iray tsy ho andevozin’ny sary vetaveta intsony ary hilamin-tsaina?
Mpihira rock malaza i Esa, nefa mbola nahatsiaro ihany hoe tsy nisy dikany ny fiainany. Inona no nataon’io olo-malaza io mba ho tena sambatra?
Tia nisetrasetra be i Hércules taloha. Andinin-teny iray fotsiny ao amin’ny Baiboly anefa dia nanome toky azy hoe afaka miova izy. Lasa malemy fanahy sy be fitiavana kokoa izy.
Adalana fanatanjahan-tena i Samuel Hamilton. Niova anefa ny fiainany rehefa nianatra Baiboly izy.
Nanao fifaninanana mitaingina môtô i Ivars Vigulis mba hahazoana laza sy voninahitra. Nisy vokany taminy ve ny fahamarinana ara-baiboly?